५ दिन देखि विप्लव कार्यकर्ताद्धारा वडा कार्यालय बन्द - Purbeli News
प्रकाशित मिति: सोमबार, बैशाख ०३, २०७५ समय: १८:२४:१९
पाँचखपन । पाँच दिन अघि देखि पाँचखपन नगरपालिकाको वडा नं. ८ र ९ का कार्यालयहरु बन्द छन् । वडा अध्यक्षहरुलाई विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताले कार्यालय बन्द गर्न धम्की दिए पछि चैत्र २९ गते देखि वडा कार्यालय अनिश्चित कालिन बन्द भएको हो । २९ गते राती विप्लवका कार्यकर्ताले वडा कार्यालय परिसरमा झण्डा गाडेर कार्यालयको साइन बोर्ड समेत लगेको वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष छत्र न्यौपानेले बताए ।
अहिलेको लडाई दलाल सरकारको बिरुद्ध भएको र दलाल सरकारका सम्पूर्ण काम काज ठप्प पार्ने भन्दै उनीहरुले विज्ञप्ति समेत जारी गरेका छन् । विभिन्न नम्बरबाट फोन गरी कार्यालय खोले कडा कारबाही गर्ने धम्की समेत दिएको न्यौपानेले बताए । अन्य जिल्लामा सामान्य कारबाही भएको छ ,यहाँ त्यो भन्दा कडा कारबाही गर्न सक्ने चेतावनी दिएको उनको भनाई छ । कार्यालय खोल्न आइतबार नै बिहिबारे प्रहरी चौकीबाट सुरक्षाको टोली गएको थियो ।
तर सुरक्षा चुनौति बढेकाले कार्यालय नखोलिएको न्यौपानेले बताए । कार्यालय बन्द हुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेको उनले बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभाका अनुसार त्यस्तो नभएको जानकारी दिए । सुरक्षाको हिसाबले कार्यालय खोल्न समस्या भएको नगरपालिकाका मेयर विपिन राईले बताए ।वडा नं. ८ र ९ को कार्यालय साबिक जलजला गाबिसको भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ ।